मंसीर २४, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले साग समापनका अवसरमा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडीहरुलाई बालुवाटार बोलाएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडीहरुमाझमा सागमा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा […]
१३ औं साग : पुरुष फुटबलमा भुटानलाई हराउँदै नेपालले जित्यो स्वर्ण
मंसीर २४, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ । दशरथ रंगशालामा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई २-१ गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले स्वर्ण पदक जितेको हो । नेपालका लागि खेलको १७ औं मिनेटमा अभिषेक रिजालले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । तर ३७ औं मिनेटमा भुटानले […]
पौडीमा कीर्तिमान बनाएकी गौरिकाको फोटो फिचर
मंसीर २४, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पौडीमा नेपालकी पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले चौंथो स्वर्ण पदक जिती कीर्तिमान बनाएकी छन् । उनले भारतीय खेलाडी शिवा‌ंगी शर्मालाई पछि पारिन् । शिवा‌ंगीको समय ५८.१५ सेकेन्ड रह्यो । यो संगै नेपालले चालु सागमा ४९ वटा स्वर्ण पदक जितेको छ । सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा महिलाको […]
मंसीर २३, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पौडीमा नेपालकी पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले चौंथो स्वर्ण पदक जितेकी छिन् ।उनले भारतीय खेलाडी शिवा‌ंगी शर्मालाई पछि पारिन् । शिवा‌ंगीको समय ५८.१५ सेकेन्ड रह्यो । यो संगै नेपालले चालु सागमा ४९ वटा स्वर्ण पदक जितेको छ । सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीमा महिलाको १०० मिटर फ्रिस्टाइलमा […]
मंसीर २३, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत जुडोमा नेपालकी पुनम श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । सोमबार लगनखेलमा भएको खेलमा ७८ केजी मुनिको तौल समूहमा पुनमले स्वर्ण पदक जितेकी हुन् । उनले बंगलादेशकी खेलाडी फरिना खानोमलाई हराएकी हुन् । १३ औं सागमा नेपालले जुडोमा जितेको यो दोस्रो स्वर्ण पदक हो ।
मंसीर २३, काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत बक्सिङमा नेपालका भुपेन्द्र थापा मगरले स्वर्ण जितेका छन् । सातदोबाटोस्थित कराते हलमा सोमबार भएको खेलमा भुपेन्द्रले ६४ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेका हुन् । भुपेन्द्रले भारतका मनिष कौसिकलाई हराएर स्वर्ण जित हात पारेका हुन् ।
२३ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत महिला फुटबलमा भारतले नेपालालई २-० गोलले पराजित गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमका प्रशिक्षक हरि खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । खेलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै खड्काले भने, ‘गोल्डको टार्गेट लिएर हिँडेको हुँ । यो पुरा गर्न नसक्दा मैले नैतिकताका आधारमा मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएको छु […]
नेपाललाई २-० गोलले हराउँदै भारतले जिते स्वर्ण, नेपालको स्वर्ण जित्ने सपना अधुरै
२३ मंसिर, पोखरा । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपालालई २-० गोलले हराउँदै भारतले स्वर्ण भारतले जितेको छ । सोमबार पोखरा रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा भारतले पहिलो हाफको १८ औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो ।
बक्सिङमा मिनु गुरुङले जितिन् स्वर्ण
२३ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको बक्सिङमा नेपालले स्वर्ण जितेको छ । ५४ केजी तौल समूहमा भारतीय खेलाडी शिक्षालाई पछि पार्दै मिनु गुरुङले स्वर्ण जितेकी हुन् । सागमा नेपालको २० वर्षपछि पहिलो स्वर्ण हो ।
१३ औं सागमा अहिलेसम्म कुन देशले कति स्वर्ण जिते ? (तालिका सहित)
मंसिर २३, काठमाडौँ । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत खेलमा नेपालले अहिलेसम्म ४५ स्वर्ण, ४४ रजत र ७६ कांस्यसहित कूल १६५ पदक जितेको छ । भारतले १३२ स्वर्ण, ७९ रजत र ४१ कांस्यसहित कूल २५२ पदक जितेको छ । यस्तै श्रीलंका ३६ स्वर्ण, ६८ रजत र ९३ कांस्यसहित तेस्रो, पाकिस्तान २९ स्वर्ण, ३४ […]
१३औं साग : क्रिकेटमा नेपाली टोलीले जित्यो काश्य पदक
२३ मंसिर, काठमाडौं । पुरुष क्रिकेटमा नेपालले काश्य पदक जितेको छ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)अन्तर्गत त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा सोमबार माल्दिभ्सलाई ५ विकटेले पराजित गर्दै नेपालले काश्य जितेको हो । माल्दिभ्सले दिएको ९६ रनको लक्ष्य नेपालले १६.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।
१३ औं साग : बंगलादेशलाई १-० ले हराउँदै नेपाल फाइनलमा
२२ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशलाई १-० ले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो । अब स्वर्णका लागि पर्सि भुटानसँग खेल्नेछ । नेपालले ११ औं मिनेटमा नै अग्रता लिइको थियो । कप्तान सुजल श्रेष्ठको पासमा सुनिल बलले गोल गरेका हुन् ।
साग खेल्न आएका श्रीलङ्कन खेलाडीहरुलाई डेङ्गु संक्रमण
२२ मंसिर, काठमाडौं । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) खेल्न आएका १३ श्रीलङ्कन खेलाडीहरुलाई डेङ्गु संक्रमण भएको छ । सात खेलाडीको त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । महिला फुटबलर ग्रायथी नानायक्कराको अवस्था गम्भीर भएकाले आइसियूमा उपचार भइरहेको छ । महिला फुटबलको प्रतिस्पर्धाका लागि गायथ्री पोखरामा थिइन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको […]
सागमा कुस्तीतर्फ नेपाललाई पहिलो स्वर्ण
मंसिर २१, जनकपुरधाम । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कुस्तीमा नेपालले पहिलो स्वर्ण जितेको छ । जनकपुरमा आज शनिबार भएको ५५ केसी तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा नेपालकी संगीता धामीले स्वर्ण जितेकी हुन् । बंगलादेशकी सखिरा सरकाररिनेलाई ४-१ अंकले पराजित गर्दै उनले स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन् ।
पुरुष क्रिकेटमा नेपालले दियो माल्दिभ्सलाई १६४ रनको लक्ष्य
काठमाडौँ । शुक्रबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पुरुष क्रिकेटमा नेपालले माल्दिभ्सलाई १६४ रनको लक्ष्य दिएको छ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ गरेको थियो । नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १६३ रन बनायो। नेपालको तर्फबाट आठौं नम्बरमा आएका करण केसीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै नेपालको स्कोर बढाएका थिए ।
सागमा गल्फको पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालले जिते स्वर्ण
मंसिर २०, काठमाडौँ । १३ औं दक्षिण एसियाली खलकुद (साग) अन्तर्गत गल्फको पुरुष टिम इभेन्टमा नेपालका शुक्रबहादुर राई, टंकबहादुर कार्की, सुभाष तामाङ र निरज तामाङ सम्मिलित टिमले स्वर्ण पदक जितेको छ । गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा शुक्रबार भएको स्पर्धामा नेपाली टोलीले कुल ८३८ अंक स्कोर गरेको थियो । यस स्पर्धामा बंगलादेशले रजत र श्रीलंकाले कास्य पदक […]
साग: महिला क्रिकेट टिम श्रीलंकासँग पराजित
मंसिर २०, पोखरा । १३औं दक्षिण एसियाली खलकुद (साग) अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा श्रीलंकाले नेपाललाई ४१ रनले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । फाइनलमा अब बंगलादेश र श्रीलंका भिड्ने भएका छन् । नेपालले कांस्यका लागि शनिबार माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नेपालले ३ खेलमा १ जित र २ हार ब्यहोरेको छ। नेपाल अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा […]
१३ औं सागमा व्यक्तिगत गल्फ तर्फमा सुभाष तामाङले जिते स्वर्ण
२० मंसिर, काठमाडौँ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष व्यक्तिगत गल्फतर्फमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ ।गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा शुक्रबार भएको स्पर्धामा सुभाष तामाङले स्वर्ण पदक जितेका छन् । बंगलादेशका महोम्मद फरादले रजत जिते भने नेपालका शुक्रबाहदुर राईले कांस्य जिते ।
साइक्लिङको पुरुषतर्फका सबै पदक नेपालले जित्यो
१९ मंसिर, काठमाडौं । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत साइक्लिङमा बुद्धिबहादुर तामाङले स्वर्ण पदक जितेका छन् । बिहीबार गोकर्णमा भएको पुरुष क्रस कन्ट्रीमा बुद्धिबहादुरले १ घन्टा १९ मिनेट ८ सेकेण्डमा निर्धारित दुरी पार गर्दै स्वर्ण पदक जितेका हुन् । नेपालकै राजिभ राईले १ मिनेट १९.४० सेकेण्डमा दुरी पारे गरेर रजत र १ मिनेट २१.०० […]
नेपाललाई ३२ औं स्वर्ण पदक, यी हुन् स्वर्ण दिलाउने साहसी खेलाडीहरु
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालको स्वर्ण पदक बिजेता संख्या ३२ पुगेको छ । यी हुन् स्वर्ण दिलाउने साहसी खेलाडीहरु : १. मण्डेकाजी श्रेष्ठ – कराँते २. सोनी गुरुङ – ट्रायथोलन ३. कमल श्रेष्ठ – तेक्वान्दो, पुम्से ४. निर्मला तामाङ, सरु कार्की, संगीता मगर – कराँते ५. सिना मादेन – तेक्वान्दो, पुम्से ६. […]